Satana - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Iza moa izahay? > Mino ny WKG > i Satana
Anjely lavo i Satana, mpitarika ny hery ratsy ao amin’ny tontolon’ny fanahy. Ny Soratra Masina dia miresaka azy amin’ny fomba samihafa: ny devoly, ny fahavalo, ny ratsy, ny mpamono olona, ​​ny mpandainga, ny mpangalatra, ny mpaka fanahy, ny mpiampanga ny rahalahintsika, ny dragona, ny andriamanitr’izao tontolo izao. Mikomy hatrany amin’Andriamanitra izy. Amin'ny alalan'ny heriny no mamafy korontana, fitaka ary tsy fankatoavana eo amin'ny olona. Efa resy tao amin’i Kristy izy, ary ny fanjakany sy ny heriny amin’ny maha-Andriamanitr’izao tontolo izao dia hifarana amin’ny fiverenan’i Jesosy Kristy. (Lioka 10,18; Apokalypsy 12,9; 1. Petrus 5,8; John 8,44; Job 1,6-12; ZAKARIA 3,1-2; Apokalypsy 12,10; 2. Korintiana 4,4; Apokalypsy 20,1:3; Hebreo 2,14; 1. Johannes 3,8)
Satana: fahavalon'Andriamanitra resy
Ankehitriny ny ankamaroan'ny tontolo andrefana dia tsy miraharaha firy ny zava-misy izay misy fiantraikany lehibe amin'ny fiainany sy ny hoaviny - ny zava-misy fa ny devoly dia fanahy tena fanahy izay manandrana manisy ratsy azy ireo isaky ny misy ary te-hanakana ny fikasan'Andriamanitra feno fitiavana. Ampirisihina ny Kristiana mba hahafantatra ny teti-dratsin'i Satana hahafahany manohitra azy ireo amin'ny alàlan'ny fitarihana sy ny herin'ny Fanahy Masina monina. (Mampalahelo fa ny Kristiana sasany dia lasa nanao fomba diso tamin'ny familiana an'i "satana" ary tsy nahy nanome sakafo fanampiny ho an'ireo izay maneso ny fiheverana fa tena misy ny devoly ary fanahy ratsy.)